Evanjelisitra - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse eran-tany
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-01 > fitoriana ny filazantsara
Rehefa nitondra fiara nody aho dia nitady zavatra mety hahaliana ahy tamin'ny radio. Nidina teny amin'ny gara Kristiana iray izay nanambaran'ny mpitory teny aho hoe: "Vaovao tsara fotsiny ny filazantsara raha tsy tara loatra!" Tiany ny Kristiana hitory ny filazantsara amin'ny mpiara-monina sy namana ary fianakaviana raha mbola tsy nanaiky an'i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy. Mazava ny hafatra ifotony: "Tsy maintsy mitory ny filazantsara alohan'ny tara ianao!" Na dia iraisan'ny Protestanta evanjelika evanjelika (na tsia aza) io fomba fijery io, dia misy fomba fijery hafa ananan'ny Kristiana ortodoksa ankehitriny sy taloha. Handeha hevitra fohy aho hamelana hevitra vitsivitsy hamela antsika hanatsoaka hevitra fa tsy mila mahafantatra tsara ny fomba sy ny fotoana itondran'Andriamanitra ny olona ho amin'ny famonjena isika mba handray anjara mavitrika amin'ny asa fitoriana ny Fanahy Masina ankehitriny.
Ny mpitory teny henoko tamin'ny radio dia mijery ny filazantsara (sy ny famonjena) fantatra ihany koa amin'ny hoe restrictivism. Io fomba fijery io dia manamafy fa ho an’ny olona izay tsy nanaiky an-kitsirano sy tsy nanaiky an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy talohan’ny fahafatesana, dia tsy misy fahafahana hovonjena intsony; Tsy mihatra intsony ny fahasoavan’Andriamanitra amin’izay. Ny fameperana àry dia mampianatra fa ny fahafatesana dia mahery noho Andriamanitra - toy ny "fatorana cosmic" izay hanakana an'Andriamanitra tsy hamonjy ny olona (na dia tsy fahadisoany aza izany) izay tsy milaza mazava an'i Jesosy ho Tompony nandritra ny androm-piainany sy niaiky ny Mpamonjy. . Araka ny fotopampianaran’ny fameperana, ny tsy fampiharana ny finoana am-pahatsorana an’i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy mandritra ny androm-piainany dia manisy tombo-kase ny anjara. 1. izay maty tsy nandre ny filazantsara, 2. ny amin’ireo izay maty nefa nandray ny filazantsara diso ary 3. ireo izay maty nefa nanana fiainana nanana fahasembanana ara-tsaina izay nahatonga azy ireo tsy hahazo ny filazantsara. Amin'ny famoronana fepetra henjana toy izany ho an'ireo izay miditra amin'ny famonjena sy ireo izay mandà izany, ny fameperana dia miteraka fanontaniana mahagaga sy sarotra.
Ny fiheverana iray hafa momba ny fitoriana filazantsara izay tazonin'ny Kristiana maro dia fantatra amin'ny hoe incluvism. Io fomba fijery io, izay heverin’ny Baiboly ho manam-pahefana, dia mahatakatra ny famonjena ho toy ny zavatra tsy ho tratra raha tsy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Ao anatin’io fampianarana io dia misy fomba fijery maro momba ny hiafaran’ireo izay tsy nanao fiekena mazava ny finoana an’i Jesosy talohan’ny nahafatesany. Hita manerana ny tantaran’ny Fiangonana izany fomba fijery isan-karazany izany. Justin Martyr (2. Taonjato faha-20) sy CS Lewis (taonjato faha) dia samy nampianatra fa Andriamanitra no mamonjy ny olona noho ny asan’i Kristy irery ihany. Mety ho voavonjy ny olona iray na dia tsy mahalala an’i Kristy aza, raha manana “finoana implisit” vokatry ny fahasoavan’Andriamanitra eo amin’ny fiainany noho ny fanampian’ny Fanahy Masina izy. Samy nampianatra fa ny finoana "implisit" dia lasa "miharihary" rehefa Andriamanitra no mitarika ny toe-javatra mba hamela ny olona hahatakatra hoe iza i Kristy sy ny fomba nanomezan'Andriamanitra ny famonjena azy ireo tamin'ny alalan'i Kristy.
Filazantsara taorian'ny postmortem
Ny fomba fijery iray hafa (ao anatin'ny inclusivism) dia mifandraika amin'ny rafitry ny finoana fantatra amin'ny hoe fitoriana filazantsara aorian'ny fandidiana. Ity fomba fijery ity dia manamafy fa ny tsy evanjelika dia azon'Andriamanitra avotana aorian'ny fahafatesany. Ity fomba fijery ity dia nalain'ny Clement of Alexandria tamin'ny faran'ny taonjato faharoa ary nalaza tamin'ny vanim-potoana maoderina avy amin'ny teolojiana Gabriel Fackre (teraka 1926). Ny teolojianina Donald Bloesch (1928-2010) dia nampianatra ihany koa fa ireo izay tsy nanana fotoana hahafantarana an'i Kristy amin'ity fiainana ity fa ny fahatokiana an'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra ny fotoana rehefa mijoro eo anatrehan'i Kristy aorian'ny fahafatesany.
Ny kristiana sasany dia mandray ny atao hoe universalisme. Ity fomba fijery ity dia mampianatra fa ny olona rehetra dia tsy maintsy ho voavonjy (amin'ny lafiny sasany) tsy maninona na tsara na ratsy, nibebaka na tsy nibebaka, ary na mino an'i Jesosy ho Mpamonjy na tsia. Ity torolàlana voafaritra ity dia milaza fa amin'ny farany ny fanahy (na olombelona, ​​anjely, na demonia) dia hovonjen'ny fahasoavan'Andriamanitra ary tsy maninona izay valin-tenin'ilay olona amin'Andriamanitra. Ity famolavolana ity dia toa nivoatra teo ambany fitarihan'ny mpitarika Kristiana Origène tamin'ny taonjato faharoa ary nanomboka tamin'izay dia nisy karazana derivations narovan'ny mpanaraka azy. Ny fotopampianarana (na tsia) ny fampianarana universalista dia tsy manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy ary mihevitra ny fiheveran'ny olombelona ny fanomezana malala-tanana ho tsy misy dikany. Ny hevitra hoe afaka mandà ny fahasoavana sy mandà ny Mpamonjy ary mbola mahazo famonjena dia hadalana tanteraka amin'ny ankamaroan'ny Kristiana. Izahay (GCI / WKG) dia mihevitra ny fiheverana ny fanatontoloana ho tsy ara-Baiboly.
Inona no inoan'ny GCI / WKG?
Tahaka ny amin’ireo olana ara-potopampianarana rehetra ifampiraharahantsika, dia manolo-tena amin’ny fahamarinana voambara ao amin’ny soratra masina aloha isika. Hitantsika ao anatin’izany ny filazana fa Andriamanitra dia nampihavana ny olombelona rehetra taminy tao amin’i Kristy (2. Korintiana 5,19). Niara-nipetraka tamintsika Jesosy, maty ho antsika, nitsangana tamin’ny maty ary niakatra tany an-danitra. Nahavita ny asa fampihavanana i Jesosy, raha vao niteny hoe: “Vita!”, talohan’ny nahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana. Avy amin’ny fanambarana ao amin’ny Baiboly, dia fantatsika fa na inona na inona manjo ny olona amin’ny farany, dia tsy hisy tsy fahampiana ny antony manosika sy ny fikasan’Andriamanitra ary ny fikasany. Tena nanao ny zava-drehetra tokoa ilay Andriamanitra telo izay iray mba hamonjena ny olona tsirairay amin’ilay toe-javatra mahatsiravina sy mahatsiravina antsoina hoe “helo”. Ny Ray dia nanome ny Zanany lahitokana ho antsika, izay Mpisoronabentsika hatramin’izay. Ny Fanahy Masina izao dia miasa mba hitaona ny olona rehetra mba handray ny fitahiana voatahiry ho azy ao amin’i Kristy. Izany no fantatsika sy inoantsika. Betsaka anefa ny zavatra tsy fantatsika ary tsy maintsy mitandrina isika mba tsy hanatsoaka hevitra (implication lojika) momba ny zavatra mihoatra noho izay nomena antsika amin'ny fahalalana sasany.
Ohatra, tsy tokony hihoarantsika ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fomba fijery eran'izao rehetra izao fa amin'ny famonjeny ny olombelona rehetra, Andriamanitra dia hanitsakitsaka ny fahalalahana hisafidy izay mandà an-tsitrapo ny fitiavany, ka hiala aminy ary handà ny fanahiny. Sarotra ny hino fa hisy hanao io safidy io, fa raha mamaky ny soratra masina amin'ny fo isika (miaraka amin'ny fampitandremana marobe tsy hanohitra ny Teny sy ny Fanahy Masina) dia tokony hanaiky isika fa mety hisy handà an 'Andriamanitra sy ny fitiavany amin'ny farany. . Zava-dehibe ny mahatsapa fa ny fandavana toy izany dia miankina amin'ny fanapahan-kevitrao manokana - fa tsy ny anjaranao fotsiny. CS Lewis nametraka azy tamin'ny fomba maranitra: "Ny vavahadin'ny helo dia mihidy avy ao anatiny". Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny helo dia toerana iray izay tsy maintsy hanohitra mandrakizay ny fitiavana sy ny fahasoavany. Na dia tsy afaka milaza mazava aza isika fa hanaiky ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona rehetra, dia afaka manantena isika fa handray izany. Io fanantenana io dia miaraka amin'ny fanirian'Andriamanitra mba tsy hisy ho very, fa ny rehetra kosa mba hibebaka. Mazava ho azy fa tsy afaka ary tsy tokony hanantena kely isika ary tokony handray anjara amin'ny Fanahy Masina hitarika ny olona hibebaka amin'ny alalany.
Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy miolikolika: amin'ny teny hafa, manohitra ny zavatra rehetra manohitra ny tanjony tsara sy be fitiavana Andriamanitra. Tsy Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra, raha tsy manao toy izany izy. Halan'Andriamanitra ny ota satria manohitra ny fitiavany sy ny antony tsara an'ny olombelona izy. Ny hatezerany koa dia endrika fitiavana - manohitra ny fanoherantsika Andriamanitra. Ao amin'ny fahasoavany, natosiky ny fitiavana, Andriamanitra dia tsy mamela antsika fotsiny, fa mifehy sy manova antsika koa. Tsy tokony heverintsika fa voafetra ny fahasoavan'Andriamanitra. Eny, mety misy ny hisafidianan'ny sasany ny hanohitra ny fahasoavana feno fitiavana sy famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, saingy tsy hitranga izany satria nanova ny sain'izy ireo - nohazavaina ao amin'i Jesosy Kristy ny tanjony.
Jereo amin'ny fitaratra nataon'i Jesosy
Satria ny famonjena, izay an'ny tena manokana sy ifandraisany, dia misy ifandraisany amin'Andriamanitra sy ny olona mifandraika amin'ny tsirairay, dia tsy tokony hihevitra isika na hametra ny tenantsika amin'ny fandinihana ny didim-pitsaran'Andriamanitra momba ny fanirian'Andriamanitra ny fifandraisana. Ny tanjon'ny fitsarana dia ny famonjena hatrany - ny fifandraisana no atahorana. Amin'ny alàlan'ny fitsarana, dia arahin'Andriamanitra ny zavatra tokony hesorina (voaozona) hahafahan'ny olona miaina fifandraisana (firaisana sy firaisana) miaraka aminy. Noho izany dia mino isika fa hitsara Andriamanitra mba hanamelohana ny ota sy ny ratsy, fa ny mpanota kosa ho voavonjy sy hampihavanina. Mampisaraka antsika amin'ny ota Izy ka mety "lavitra" toa "ny maraina amin'ny hariva". Tahaka ilay osy tany Israely taloha, Andriamanitra dia mandefa ny fahotantsika any an'efitra mba hananantsika fiainana vaovao ao amin'i Kristy.
Ny didim-pitsaran'Andriamanitra dia manamasina, mandoro ary manadio ao amin'i Kristy mba hamonjy ilay olona notsaraina. Ny fitsaran'Andriamanitra dia fomba fandrafiana sy fandinihana - fisarahana zavatra izay mety na diso, izay manohitra na ho antsika, izay mitondra fiainana na tsia. Mba hahafantarantsika ny toetry ny famonjena sy ny fitsarana dia mila mamaky ny soratra masina isika, tsy amin'ny alàlan'ny fitaratra niainantsika manokana, fa amin'ny alàlan'ny fitaratra an'ny olona sy ny asan'i Jesosy, ilay Mpanavotra sy mpitsara antsika. Saintsaino izao, diniho ireto fanontaniana manaraka ireto sy ny valin-teniny mazava:
Voafetra ao amin'ny fahasoavany ve Andriamanitra? NO!
Voafetra amin'ny fotoana sy toerana ve Andriamanitra? NO!
Andriamanitra irery ihany no afaka miasa ao anatin'ny rafitry ny lalànan'ny natiora toa antsika olombelona? NO!
Moa ve voafetra Andriamanitra noho ny tsy fahalalantsika? NO!
Tompon'ny fotoana ve izy? YES!
Azony atao ve ny mametraka fotoana maro isan-karazany amin'ny fotoana iainany araka izay ilainy mba ahafahantsika misokatra amin'ny fahasoavana amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina? Tokoa!
Ny fahafantarantsika fa voafetra ihany isika fa tsy Andriamanitra dia tsy afaka mametraka ny fetrantsika amin'ny Ray isika, izay mahalala tsara sy feno ny fontsika. Afaka manorina amin'ny fahatokiany isika, na dia tsy manana ny famaritana hevitra aza isika momba ny maha-izy ny fahaizany sy ny fahasoavany amin'ny antsipirian'ny fiainan'ny olona tsirairay, na ao amin'ny fiainana izany na amin'ny ho avy. Ny zavatra fantatsika dia izao: amin'ny farany, dia tsy hisy hiteny hoe: "Andriamanitra, raha mba nanao soa kokoa ianao ... dia mety ho namonjy olona X". Ho hitantsika rehetra fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampy bebe kokoa.
Ny vaovao tsara dia ny hoe ny fanomezana maimaim-poana fanavotana ho an'ny olombelona rehetra dia miankina tanteraka amin'ny faneken'i Jesosy antsika - tsy amin'ny fanekena azy. Satria "voavonjy izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo", dia tsy misy antony tokony handraisantsika ny fanomezam-pahasoavany hiaina mandrakizay ary hiaina araka ny teniny sy amin'ny fanahy izay nanirahan'ny Ray antsika mba hahafenoantsika fenoina anio Mizara amin'ny fiainan'i Kristy. Noho izany, misy ny antony rehetra hanohanan'ny Kristiana ny asa tsara amin'ny fitoriana ny filazantsara - ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny asan'ny Fanahy Masina, izay hitarika ny olona hibebaka sy finoana. Tena mahafinaritra ny mahafantatra fa sady manaiky sy mahay antsika i Jesosy.